imanoela fifaliana · Jolay 2012 · Global Voices teny Malagasy
imanoela fifaliana · Jolay, 2012
Lahatsoratra farany an'i imanoela fifaliana tamin'ny Jolay, 2012
Azia Atsinanana 19 Jolay 2012
Nanatontosa ny fifidianana parlemanterany tamin'ny 7 Jolay ny tany Timor Atsinanana. Ambany ny taha-pandraisan'anjara tamin'ity taona ity fa mba tsy nisy kosa aloha na izany aza ny tranga goavana nahitana herisetra sy hosoka amin'ny hala-bato. Nampiasa ny tenifototra #eleisaun2012 sy #timorelections ny mponina amin'ny aterineto hizarana ny vaovao mikasika ny fifidianana.
Amerika Latina 11 Jolay 2012
Nandeha tany amin'ny birao fandatsaham-bato ny Meksikana tamin'ny 1 Jolay hanao ny fifidianana ny ho filoham-pireneny. Nanomboka nizara ny heviny sy ny traikefany ihany koa ireo mponin'ny aterineto raha vao nisokatra ny birao fandatsaham-bato. Nikarakara tranokala sy tenifototra ihany koa izy ireo hanangonana ireo tatitra mikasika ny hosoka sy ny tsy fanarahan-dalàna hafa.
Nodonin'ny sakaizany taloha tamin'ny fiara ary navelany tany amin'ny toby fitsaboana vonjimaika ilay vehivavy renim-pianakaviana antsoina hoe Francheska Duarte. Ilay mpitsara nomena andraikitra hitsara io raharaha io, dia nahita fa tsy heloka bevava no azo anamelohana an'i Jorge Ramos, sakaizan'i Francheska taloha fa nohon'ny tsy fikarakarana ilay marary fotsiny ihany. Niteraka korontana tao amin'ilay nosy io didim-pitsaràna io .
Azia Atsimo 05 Jolay 2012
Azia Atsimo 04 Jolay 2012
Nisy nitifitra tao an-tananan'i Peshwar i Ghazala Jawad, mpihira fanta-daza iray teratany Pakistane. Tsy fantatra mihitsy ny mombamomba ilay namono azy. Mety famonoana vokatry ny fahafaham-barakan'ny vadiny taloha ve izy io, noho izy tsy mankasitra azy hihira? Sa ve ny Talibana no nanao izany, noho izy nanohitra azy ireo hatrany tamin'ny asany?
Azia Atsinanana 02 Jolay 2012